Nougat mmelite, Moto Z na illogicality nke rụọ | Gam akporosis
Enweghị mgbagha na Nougat mmelite nke Moto Z dị iche iche
Manuel Ramirez | | Motorola, Noticias, Gam akporo nsụgharị
Ofbọchị mmelite ma ọ bụ akụkọ metụtara Nougat ahụ nke na-erute ọtụtụ ngwaọrụ, ebe ndị ọzọ na-atarịta ibe ha aka na-eche ihe a ga-amata banyere ọdụ ha nwee ọtụtụ windo nkwado, notma Ọkwa ndị ọhụrụ ma ọ bụ usoro DOZE nke arụ ọrụ ugbu a ọbụlagodi ekwentị na akpa gị.
Moto Z bụ otu n'ime ikpe ndị ahụ ezi uche na-adịghị na ya ma ọ bụ ndị ahịa Motorola rere ya. ndia bu ndi echere ihe dị ka ọnwa abụọ maka nwelite na Nougat nke Verizon wepụrụ na November. Ezi uche adịghị na ya n'ihi na ọ na-abụkarị ụdị ndị ahụ a na-emeghe emeghe na-enweta mmelite mbụ. Ihe kachasị mma banyere akụkọ a bụ na Motorola gosipụtara na Nougat ga-abịa Moto Z Play na ọnwa Machị.
Kwuru mmelite na ihe ndị ọzọ maka ọnụ ndị ahụ na-achọghị nnukwu ihe akaebe na enweghị njikọ na ngwa nke ndị na-ahụ maka ọrụ nke na-egbu oge ọbịbịa ha. Ọ bụ ezie na n'ihe banyere Moto Z ọ dị ezigbo iche, ịmara site n'otu Motorola na Nougat ga-abụ etinye ya na mbipute a na-emeghe nke Moto Z ka ọnwa Febụwarị.
O kwukwara na ma mbipute maka ndị na-ebu (n'okwu a Verizon) na unlocked unere nke Moto Z Play, ga-enwe ha Android 7.0 na ọnwa nke Machị.
Nghọta a ma ọ bụ nkeiche dị n'etiti nsụgharị Verizon na ndị a na-emegheghị nke Moto Z bụ n'ihi na ebuputara nke mbụ na ngwụcha ọnwa Julaị, ebe nke abụọ kụrụ ahịa na njedebe nke ọnwa Septemba. O doro anya na ọ dịghị ihe dị n’etiti ha abụọ, na na ha nọ na kalenda dị iche iche mgbe ha na-emelite ụdị ọhụrụ na ndị otu dị iche iche na-arụ ọrụ maka ụdị ọ bụla.
Ihe mgbagwoju anya a bu otu n’ime ihe kpatara mmelite na-egbu oge ma o mechara buru onye oru, onye n’amaghi aghugho ndia. ịkwụ ụgwọ ọbọgwụ na a Nougat na-ewe karịa ụgwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Enweghị mgbagha na Nougat mmelite nke Moto Z dị iche iche
Ma ihe ị na-agụta ma ọ bụrụ na moto z nwere update ebe a na Spain ka 7.0 site na njedebe nke November. M na-eche echiche.
Ihe niile ị chọrọ ịma iji lelee TV na gam akporo
Sony G3221 gafere AnTuTu na igwefoto 23MP na 16MP